septembre 2017 - Page 2 sur 79 -
Fanisana fitaovam-piadiana : 90% no vita teo anivon’ny polisim-pirenena
Araka ny nambaran’ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, Andrianisa Mamy Jean Jacques, dia efa tonga any amin’ny 90 isan-jaton’ ny fanisana ireo basy ny eo anivon’ny polisim-pirenena. “Talohan’ny baiko nomen’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, dia efa natomboka ny …Tohiny
Grevin’ny SMM : Nisokatra ny fitsarana, nandeha irery i Faniry
Nisokatra ho an’ ireo izay mila raharaha rehetra ny fitsarana tetsy Anosy omaly, na dia efa nandrahona ny hitokana, ary nanamafy izany aza ny sendikan’ny mpitsara. Taorian’ny taratasy filazana ny tokony hamoahana ny fitsarana omaly …Tohiny
Fikirakirana vola : Efa azo atao ny mampifandray ny kaonty amin’ny banky sy amin’ny finday
Tsy mitsaha-mivoatra ny tontolon’ny fikirakirana vola eto amintsika. Amin’izao fotoana, efa azon’ny mpanjifa atao ny mampifandray ny kaontiny amin’ny banky sy ny kaontiny amin’ny finday. Tolotra izay hanala fahasahiranana ny mpanjifa amin’ny fivezivezena sy amin’ny …Tohiny
Diaspora Malagasy : Hijery ny fampandrosoana an’i Madagasikara
Hotanterahina ny faha-26 ka hatramin’ny 28 ny volana oktobra ho avy izao ny fihaonamben’ny diaspora Malagasy etsy amin’ny village Voara Andohatapenaka, hetsika izay novolavolain’ny governemanta malagasy amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny. Teny filamatra ho entina mandritra …Tohiny